USURYA NAMASKARA: MINGAPHI IMIJIKELO EKUFUNEKA YENZIWE NGESANTYA ESISHEDI ESI-5 SEEKGS- PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Imidlalo I-Yonex-Sunrise India ivule i-2021 iseti ngoMeyi, eza kubanjelwa ngasemva kwengcango ezivaliweyo
Ekhaya Impilo Impilo-ntle Ngu-Wellness lekhaka-Chandana Rao UChandana Rao ngoJulayi 2, 2018
Ukuba ungumntu okuhambo lokunciphisa umzimba, ngokuqinisekileyo uya kuba uvulelekile ukuzama iingcebiso ezintsha ezinempilo ezinokukunceda uphelise ubunzima ngokukhawuleza, akunjalo?
Njengoko sisazi, ukutyeba kakhulu okanye ukutyeba kakhulu yimeko enganampilo, engenakubangela kuphela iziphumo ebezingalindelekanga, kodwa inokuba ngunobangela wezifo ezithile eziyingozi.
ukuba nesifuba esikhulu kangakanani ngokwemvelo
Ngaphandle kokwehlisa inqanaba lokuzithemba komntu kwaye oko kungakhokelela kuxinzelelo, ukutyeba kakhulu kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezinjengentlungu edibeneyo, iintlungu zesisu, izifo zokugaya ukutya, ukudinwa, ukuhla kwehomoni, ukonyuka kokutya, njl.
Ukongeza, amafutha omzimba agqithisileyo anokubangela izifo eziphambili ezinjenge-cholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, izifo zentliziyo, ukungasebenzi kakuhle kwesibindi, amatye enyongo, isifo seswekile, iintlobo ezithile zomhlaza, njl.
Ngapha koko, esona sizathu siphambili sokuhlaselwa sisifo sentliziyo ebantwini saziwa ngokutyeba kakhulu, ke ngoko kubaluleke kakhulu kubaluleke kakhulu ukuba sikwazi ukubona imeko yemithambo engaphezulu komzimba kunye nokuthatha amanyathelo okuhlala umile.
Ukuba umntu akenzi mgudu wokugcina ubunzima obunempilo kunye ne-BMI esempilweni (i-Body Mass Index), umntu ke oko unokubeka ubomi bakhe emngciphekweni omkhulu wempilo.
Yintoni Esinceda Sinciphise Ubunzima?
Sele sazi ukuba ukutya ukutya okusempilweni okunesondlo, ukususa iswekile engenampilo kunye namafutha ekudleni, ukugcina umlindo kwi-caloric intake, ukuzilolonga rhoqo, ukunciphisa uxinzelelo, ukunyanga iimeko ezithile zempilo kunye nezifo zehomoni ezinokuba negalelo kubunzima inzuzo, njl., Ezinye zezinto umntu amele azenze ukugcina ubunzima bakhe bujongiwe.
Ukuzivocavoca nangaluphi na uhlobo kunokunceda ukunciphisa ubunzima kwaye kugcinwe nokwehla kobunzima nangona kunjalo, ezinye iindlela zokuzilolonga zinokubonakalisa ukuba zisebenza ngakumbi kunezinye.
Kutshanje, abantu abaninzi bathathe i-yoga ukunceda ukunciphisa umzimba kunye nokunyanga iimeko ezininzi zempilo.
Makhe sibone ukuba i-yoga ingasinceda njani ukunciphisa umzimba, ngezantsi.
IYoga kunye nokuThoba umzimba
Uninzi lwethu sele lusazi malunga neyoga, indlela yakudala yokwenza ethi isincede ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo nangokomoya.
Ngeengcambu zaseIndiya, iyoga ngoku sele iyindlela eyaziwayo yokuzivocavoca kwintlalontle yomhlaba wonke, ngenxa yokusebenza kwayo.
I-yoga yaziwa ngokunceda ekunyangeni nasekuthinteleni inani lezifo, ukusukela ekutyebeni kakhulu ukuya kumhlaza kunye nayo yonke into ephakathi!
Ukuziqhelanisa neyoga kunokunyanga izifo zengqondo ukusukela kuxinzelelo ukuya kwischizophrenia!
Kwaye amandla okuphilisa eyoga axhaswa nophando lwenzululwazi, olwenza ukuba abantu babhalise kule nkqubo nangakumbi!
Ngoku, iyoga kuthiwa yenye yeendlela ezisebenzayo zokunciphisa umzimba kunye nokunyanga ukutyeba.
Kukho inani leyoga elichaphazela ngqo izifo ezithile kubandakanya ukutyeba kakhulu kunye neSurya Namaskara okanye ukubulisa elangeni kuyaziwa njengeyona nto ilungileyo yokunceda ukunciphisa umzimba.
Kungenxa yokuba uSurya Namaskara unceda ukutshisa iikhalori ezininzi ngaxeshanye kwaye anyuse izinga lokunciphisa umzimba ukuya kuthi ga kwinqanaba elibalulekileyo.
ISurya namaskara ikwanazo nezinye izibonelelo zempilo ezinje ngokuphucula ukwetyisa kunye nokugonywa, ukunyanga uxinzelelo kunye noxinzelelo, njl.
Zithini iiPosi ezibandakanyekileyo eSurya Namaskara?
Iimpawu zika 'Surya Namaskara' zezi zilandelayo kwaye kufuneka zilandelwe ngokulandelelana okufanayo - 'pranamasana', 'hastauttanasana', 'hastapadasana', 'ashwa sanchalanasana', dandasana ', ashtanga namaskara', bhujangasana ',' adhomukha shwanasana ' , 'ashwasanchalanasana', 'hasthapadasana', hasthauttanasana 'kunye' tadasana '.
Ezi zimbini zili-12 eSurya Namaskara kufuneka zenziwe ngokulandelelana kwangoko, ngolandelelwano olufanayo. Oku kugqiba umjikelo omnye weSurya Namaskara.
Njengoko i-'Surya Namaskara 'ijolise ekusebenzeni onke amalungu omzimba, yenye yezona mithambo ilungileyo yokunciphisa umzimba kunye nokutsha kwamafutha.
Intsingiselo yemibala kwiflegi yaseIndiya
Ke, mangaphi amaxesha ekufuneka enziwe umjikelo we 'Surya Namaskara' ukunciphisa umzimba kwaye ngakumbi ukunciphisa umzimba malunga neekhilogram ezintlanu ngenyanga kwaye ngesiphi isantya? Fumanisa apha ngezantsi.
Mangaphi amaXesha ekufuneka uSurya Namaskara 'enziwe ukunciphisa umzimba?
Ngoku, njengoko sele sisazi, ukunciphisa umzimba kuthatha ixesha nangalo naluphi na uhlobo lokuzilolonga, njengoko umzimba ufuna ixesha lokunyusa izinga lokunciphisa umzimba kunye nokwenza ukuba kutshiswe iikhalori ezongezelelweyo.
Ke, nokuba unoSurya Namaskara kungathatha ixesha elithile ukubona iziphumo kwaye, inani elingaphezulu lemijikelezo oyenzayo ngosuku, kokukhona ulahlekelwa bubunzima.
Izifundo zibonise ukuba umjikelo omnye weSurya namaskara owenziwe kwimizuzu emi-3 ungatshisa ukuya kwiikhalori ezili-13.
Ke, ukuba uqala ngemijikelo embalwa yeSurya namaskara ngemini kwaye uyonyuse ngokuthe chu ukuya kuthi ga malunga nemijikelo engama-25 ukuya ku-30, ekufuneka igqitywe kwimizuzu engama-40, emva koko unokulahla ukuya kwi-5 yeekhilogram ngenyanga!
Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukugcina engqondweni ukuba ukwenza nje malunga ne-25-30 imijikelezo yeSurya Namaskara ngosuku, ngaphakathi kwemizuzu engama-40, kunokukunceda ulahlekelwe zii-5 kilos ngenyanga, xa zidityaniswe nemikhwa yokuphila esempilweni kunye nokungqongqo Inkqubo yokutya kufuneka ilandelwe, ukuze iSurya Namaskara isebenze ekuncediseni ukunciphisa umzimba.
Ke, ukuqukumbela, ukwenza malunga ne-25-30 imijikelo yeSurya Namaskara ngosuku, ngaphakathi kwemizuzu engama-40, kunokukunceda ulahlekelwe ziikhilo ezi-5 ngenyanga, xa zidityaniswe nemikhwa yokuphila esempilweni!
Imultani mitti enepakethi yobuso ye-aloe vera
Uyisebenzisa kanjani ioyile kalonji yeenwele
elona yeza lilungileyo lomlomo wezilonda ekhaya
Iinwele zamantombazana inyathelo ngenyathelo
mangaphi amaqanda abilisiweyo endifanele ukuwatya ngosuku
ukususa iinwele zobuso ekhaya ngokwendalo